Apple Inoburitsa iOS 11.2 uye watchOS 4.2 Beta 2 yeVagadziri | IPhone nhau
Apple inoburitsa iOS 11.2 uye watchOS 4.2 Beta 2 yevagadziri
Kugadzwa kutsva kwevhiki nevhiki neBetas uye ino nguva kuvhurwa kweshanduro dzekupedzisira dze iOS 11.2 uye watchOS 4.2 zvadaro kusvika Beta 2, parizvino inoitirwa chete kune vanogadzira. Idzi shanduro nyowani dzave kutowanikwa kurodha pasi kubva kune iyo terminal pachayo kana iwe uine iyo yekuvandudza profile yaiswa, kana kubva Apple's yekuvandudza portal.
Iko shanduko mune idzi Betas nyowani parizvino hazvishamise zvakanyanya, uye zvinosanganisira mhinduro kune mamwe mabugs neiyo Calculator app, kana mapikicha matsva emidziyo yekare, pamusoro pemifananidzo yemifananidzo iyo yatinogona kuona mu iPhone X kushambadzira, asi chete kune ino terminal.
iOS 11.2 inogona pakupedzisira inosanganisira Apple Kubhadhara Cash, chimiro chakaziviswa naApple muKeynote yekupedzisira mharidzo yeIOS 11 asi yatisati tambonzwa chero chinhu kunze kwekudonha kwemukati. Inotarisirwa kuve nzira inozivikanwa yekubhadhara pakati pevanhu, yakasanganiswa muApple Messages application, uye yatinogona kushandisa kuendesa iyo mari kuaccount yedu kana kubhadhara kune vatengesi vanoshandisa Apple Pay. AirPlay 2 ndeimwezve yezvinhu zvitsva zvinotarisirwa mune ino inotevera vhezheni, asi parizvino hapana kana chiratidzo chavo mune idzi Betas nyowani, zvakafanana nekuwiriranisa kweMeseji muICloud.
mawatchOs 4.2 Beta 2 iripowo yave kuwanikwa kurodha pasi pane yedu Apple Tarisa kana isu tine iyo yekuvandudza profile yakaiswa rangarira kuti hapana Ruzhinji Beta yewatchOS, nekuti hazvigoneke kudzikisira kune yepamutemo vhezheni gare gare kana tichida. Izvo zvitsva zveBeta iyi yeApple Watch hazvinzwisisike panguva ino kune vashandisi, saka zvinoita sekunge zvinongo ganhurirwa mukuvandudza mashandiro uye kugadzirisa zvakaonekwa zviputi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple inoburitsa iOS 11.2 uye watchOS 4.2 Beta 2 yevagadziri
Kukundikana kukuru pakumisikidza iyo nyowani iPhone X muNorth American AT&T